Inselelo Yokumaketha Amasu Nokuthi Ungawaphula Kanjani | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 16, 2014 NgoLwesithathu, July 16, 2014 Douglas Karr
AbakwaTeradata, ngokubambisana neForbes Insights, bakhiphe ifayili le- Ucwaningo olusha lokho kuhlose ukuhlola izinselelo nezixazululo zokudiliza ama-silos wokumaketha. Ucwaningo lufaka ama-CMO amahlanu ahola izinkampani zombili ze-B2B kanye ne-B2C ukuze babelane ngemvelaphi yabo, imibono yabo, izinselelo nezisombululo zabo.
Iphepha elimhlophe likhuluma ngezinselelo zokukhangisa amasilo, kufaka phakathi ngalinye linombono walo womkhiqizo, okuhlangenwe nakho okuhlanganisiwe kwamakhasimende, ukuthumela imiyalezo ngendlela engeyona, ukukhuthaza ukuthengiswa kwesikhashana esifushane ngamasu omkhiqizo wesikhathi eside, amaqembu ahlanganiswe kabi futhi angabambisani, kanye nokuntuleka kwesilinganiso ekukhuleni okubalulekile izindawo ezinjenge-digital njengoba isililo esisodwa sincintisana nesinye.
Ukweqa amasosha wokumaketha kudinga:
Ukushintsha ukuncintisana nokuzihlukanisa phakathi kwamasilo ngokuxhumana nokubambisana.
Ukuhlanganisa amasu wokumaketha lapho kudingeka. Ocwaningweni lweTeradata, abathengisi bathi indlela engcono kakhulu yokumaketha ihlangane kakhulu neminye imisebenzi ukusetha izinqubo ezihlanganisiwe.
Ubuholi kufanele busebenze njengabagqugquzeli, basungule izinhlaka, bakhuthaze ukusebenzisana ngamaqembu nezikhungo zolwazi, kanye nokuthuthukisa ithalente lokumaketha.
Abakhangisi abacabanga njengabacebisi, benza imininingwane ebanzi yenkampani, baqeqeshe ithalente lokumaketha futhi babambe iqhaza ekuthuthukisweni kwamasu
Ukufinyelela ebuholini obuphezulu. I-Teradata ithole ukuthi abathengisi abanezibopho zokuphatha bacishe baphindwe kabili kunabanye ukukholwa ukuthi azikho izithiyo ekuhlanganisweni kweminyango.
Ngaphezu kwakho konke - ukuvumelanisa izinhloso zezinhlelo zokukhangisa ne izidingo zamakhasimende namakhasimende kuqinisekisa ukuthi wonke umuntu usebenza ngendlela efanayo. Kunokuqondisisa nokuqondiswa kwetoni embikweni, ngakho-ke qiniseka ukukwenza landa bese wenza okusemaphepheni abalulekile.
Tags: I-CitrixUkuguqulwaukubambisanaforbesindawoAmanethiwekhi weJuniperama-silos wokumakethaamaqembu wokumakethaama-silosteradataI-Wi-Fi Alliance